निसान हत्या प्रकरण : यी अभागी बाबु जो मलेसियाबाट काठमाडौ आई सिधै छोराको चितामा आगो लगाउन आर्यघाटमा पुगे ! – Etajakhabar
निसान हत्या प्रकरण : यी अभागी बाबु जो मलेसियाबाट काठमाडौ आई सिधै छोराको चितामा आगो लगाउन आर्यघाटमा पुगे !
खड्काको सपना थियो छोरा निशानलाई ‘ठूलो मान्छे’ बनाउने । एउटा मात्रै छोरा निशानको उज्यालो भविष्यका लागि उनी विगत तीन वर्षदेखि मलेसियामा रगत र पसिना बगाईरहेका थिए ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन २४, २०७५ समय: १९:४८:१९